1485 sqft ကျယ်ဝန်းပြီး ၊ အိပ်ခန်း(၃) ခန်းပါသည့် အင်းယားကန်အနီးရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Diamond Inya Palace ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,200 သိန်း (ကျပ်) - S-6874394 | iMyanmarHouse.com
Mandalay Golden Wing Co., Ltd. ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09420097992, 09777898988, 09420097992, 09777898988
1485 sqft ကျယ်ဝန်းပြီး ၊ အိပ်ခန်း(၃) ခန်းပါသည့် အင်းယားကန်အနီးရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Diamond Inya Palace ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။
Mandalay Golden Wing Co., Ltd. ပိတ်ရန်
2 Sep 2019 12:00 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
2166 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် S-6874394
ကွန်ဒို4ခန်3းခန်း
5,200 သိန်း (ကျပ်)
1487 sqft ကျယ်ဝန်းပြီး ၊ အိပ်ခန်း(၃) ခန်းပါသည့် အင်းယားကန်အနီးရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Diamond Inya Palace ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။
- Diamond Inya Palace Condo မှာ ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ၂ ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။
- အခန်းတွင်းအကျယ်အ၀န်း မှာ 1485 စတုရန်းပေ ကျယ်ဝန်းသည်။
-အခန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ စုစုပေါင်း မာစတာ (၂) ခန်း ၊ အိပ်ခန်း(၁)ခန်း ၊ ဧည့်ခန်း(၁)ခန်း ၊မီးဖိုခန်း (၁)ခန်း ၊ ရေချိုးခန်း ၊အိမ်သာ နှင့် အိမ်ဖော်အခန်းပါ ပါဝင်ပါသည်။
- အချက်အချာကျပြီး သွားလာရလွယ်ကူသည့် နေရာတွင် တည်ရှိသည်။
- အင်းယားကန်အနီးတွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရား ၊ မြန်မာပလာဇာ ၊ ကမ္ဘာအေးဂမုန်ပွင့်၊ Inya Lake Hotel , Sedona Hotel , Parami Hotel , Lotte Hotel , ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် စသည်နေရာများသို့ အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ပါသည်။
- Diamond Inya Palace Condo သည်5stars hotel level service ရှိသော condo ဖြစ်ပြီး facility floor (၃) လွှာထည့်သွင်းပေးထားပြီး လူကြီးမင်းတို့အတွက် luxury life style တစ်ခုရရှိအောင် ဖန်တီးပေးထားသော ရန်ကုန်မြို့၏ အကောင်းဆုံးသော luxury condo ဖြစ်ပါသည်။
- Facility အလွှာများမှာ မြေညီထပ် ၊ (၆) လွှာနှင့် (၂၂) လွှာတို့ဖြစ်ပြီး Facility ပေါင်း ၆၀ ကျော်ပါဝင်သည့် ကွန်ဒိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
-ထို့အပြင် ကားအစီးရေ (၆၀၀)ကျော် ရပ်နားနိုင်ရန် Car Parking ၅လွှာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသည်။
Condo တစ်ခုလုံးတွင် ဓါတ်လှေကားစုစုပေါင်း (၂၁) စီးထားရှိသောကြောင့် Customer များအတွက် သွားလာရ လွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။
-Condo အခန်းများကို KBZ , AYA , Yoma , CB bank တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည်။
- အထပ်အမြင့်နှင့် View အပေါ်မူတည်ကာ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိပါသည်။
*** အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။**
Diamond Inya Palace နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ
တည်နေရာ၊ အကျယ်အ၀န်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် Diamond Inya Palace Condominium ကို ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်းမပေါ်က မြေ(၂)ဧက အကျယ်အ၀န်းပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အထပ်အမြင့် စုစုပေါင်း(၃၃)ထပ်နဲ့...
ကြော်ငြာကို Report လုပ်မည်
ဤကြော်ငြာမှာ ဘာတွေမှားယွင်း နေပါသလဲ၊ ပြောပြပေးပါ။
Report လုပ်ပြီးပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6874394 အတွက် Mandalay Golden Wing Co., Ltd. သို့ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
No.(2), U Tun Nyein Street, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အောင်ဓမ္မကွန်ဒိုတွင် (1317sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
မရမျးကုနျးမွို့နယျ/မဟာဘောဂလမျး ဂန်ဓမာ Wholesale...
တော်ဝင်ကွန်ဒိုတွင် (1400sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
2,100 သိန်း (ကျပ်)
Junction 8 Condo တွင် (1370sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
(1519sqft)အကယျြ၊ မရမျးကုနျး၊ Royal Parami Condo, ကှနျဒိုတိုကျသဈ ရောငျးရနျရှိ
ရွှေကမ္ဘာအိမ်ရာတွင် (1500sqft) အကျယ်ရှိကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
1,750 သိန်း (ကျပ်)
အခြား အရောင်းကြော်ငြာအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
22 သိန်း (ကျပ်)
Junction 8 Condo တွင် ကွန်ဒိုအခန်းငှားရန်
အခြား အငှားကြော်ငြာအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
လုံးချင်း တိုက် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
ပေအကျယ်(120×43) လုံးချင်းအိမ် ဘိုးဘွားပိုင်မြေနှင့်ခြံ အမည်ပေါက်
မရမ်းကုန်း ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ လုံးချင်းအရောင်း
6,800 သိန်း (ကျပ်)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ